Maxaad ka taqaan Jaceeylka Yoo Yoo!!!.
Tuesday February 26, 2019 - 23:58:04 in Wararka by Mogadishu Times
Wiil Ka mid ah, saaxiibadeeyda FB ayaa i weeydiiyay, su'aal qalafsan? Yaxya weligaa wax ma jeclaatay? Waxaan Ku iri: Haa, Diinteeyda, Dalkeeyga, Dadkeeyga iyo……. Waxa uu yiri: taa ma ahan, Tan laba qof oo Kala jinsi ah? Waxaan
Wiil Ka mid ah, saaxiibadeeyda FB ayaa i weeydiiyay, su'aal qalafsan? Yaxya weligaa wax ma jeclaatay? Waxaan Ku iri: Haa, Diinteeyda, Dalkeeyga, Dadkeeyga iyo……. Waxa uu yiri: taa ma ahan, Tan laba qof oo Kala jinsi ah? Waxaan iri: Haa, Abootadeey, Habar yar, Hooyo, walaasheey…….
Waxa uu yiri: Taa Maya. Qof kale oo Haween ah. Waxaan iri: Haa, waa Ku fahmay, ma Anigaa dhagax ah maxaan wax u jeclaan waayay!!.
Waxa uu yiri: Jaceylku muxuu u baahan yahay jaceeylku?
Waxaan Ku iri: Run & Daacadnimo, Jaceeylkaaga Qalbiga Ku qunfulo, ( F.S:1aad). Kadibna xanaaneey ( F.S:2aad). Xaalada Dunidu waa is bedbedeshaa, haddii uu kaa wasakhoobo ha tuurin ,dib u nadiifi ( F.S: 3aad). Hadduu Ka dilaaco Tolo , marna haka quusan( F.S: 4aad).Laakin mid Ogoow, Jaceelkaagu yuuna maskaxdaada Hogaamin ee maskaxdu jaceeylka ha hogaamiso.
Waxaa uu igu yiri: Adeer Jaceeylka wax kama taqaanid, intaad Jaceel Dayac tiri laheyd, mid cusub ayaa la raadsadaa.. Sharciga Ciyaalka xaafada ee yoo yooga ayaa sidaa qabo.
Waxaan Ku iri: Jaceeylku sida qeybaha kale ee nolosha ayuu waaya aragnimo u baahan yahay, ee odayaasha Ka faa’iideeyso. Wuxuu yiri: kani ma ahan mid waaya aragnimo u baahan.
Kadibna waxa uu ii Soo qoray duco ah "Adeer Dhooraa tahay”.
Anna waxaan u qoray, Aamiin.
U Kala gar qaada, Ciyaalka xaafadda iyo odayaashii hore.